Itoobiya Oo Bilowday Koronto Ka Dhalinta Biyo Xireenka “Nahda” – Goobjoog News
Itoobiya ayaa sheegtay in ay bilowday ka dhalinta korontada biyo xireenka wabiga ka hor inta uusan dhamaanin dhismihiisa, arrinkaani ayaa timid ka hor kulanka wasiirada waraabka ee dowladaha Itoobiya, Masar iyo Suudaan.
Mashruuca biyo xireenka ayaa hadda waxaa ka harsan 30%, waxaana la sheegay in koronto ka dalintaiyo dhameystirka uu noqon doono mid tartarttib u dhamaada.
Wasiirada dhirta iyo daaqa ee dowladaha Itoobiya, Masar iyo Suudaan ayaa waxaa la filayaa in ay kulan ku yeeshaan maanta oo arbaco ah magaalada Adis-ababa, kaasi oo diiradda lagu saarayo sidii xal ka mada dambeys ah looga gaari lahaa arrimaha khilaafka eek u saabsan biyo xireenka.
Dowladda Itoobiya ayaa bilowday dhismaha biya xireenka sanadkii 2011,kaasi oo ay ka bilowday wabiga Niil ee magaalada Khuba.
Khuba ayaa waxay ku taalaa xaduudka qeybiya Suudaan iyo Itoobiya waxayna 980 KM u jirtaa Adis-ababa, waxaana la sugayaa in mashruuca la dhameystiro bisha Julay ee soo socota.
Dhanka kale dowladda Masar ayaa waxay cabsi ka muujisay in uu saameyn ku yeesho biyo xireenka ay sameyneyso Itoobiya, waxay Adis-ababa sheegtay in arrinkaani aysan ula jeedin in ay waxyeeleyso Masar.
Korontada laga dhalinayo biyo xireenkaan ayaa waxay gaareysaa 6 kun oo Megabay oo gudaha ah waxayna itoobiyo sheegtay in arrinkaani uu ka qeyb qaadanayo in lagu takhaluso saboolnimada .
Dowladda Ingiriiska Oo Leerarka Cadceedda Ku Shaqeeya Ku Wareejisay Koonfur Galbeed
Ojcnkq zihciw Generic cialis usa cialis 5mg price
Lyaljc qrofxo Viagra cialis daily cost
Lfntbz hiwykx Viagra or cialis cialis walmart
Zccuqs vkpuga best online pharmacy Mzpvb
best cialis price cialis 20mg online viagra levitra cialis o...
generic cialis australia cialis original cialis com [url=htt...
big cheap alternates of viagra viagra from canada viagra pil...
generic cialis no prescription paypal cialis 20mg for sale b...
buy viagra, canada viagra australian buy viagra online [url=...